Nei vashandi vakuru vachienda? Nei makambani makuru achifanira kutora basa? | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 17, 2006 Chitatu, October 29, 2014 Douglas Karr
Kwemakore gumi apfuura, ndakave nemufaro wekushandira makambani akati wandei. Iyo kambani yandinoyera zvakanyanya ndeye Landmark Communications. Vashandi veCorporate paLandmark vakagonesa vashandi kuti vazvikure pachavo zvakanyanya kana zvishoma sezvavaizoda. Kambani yakazviita isingatyi kudyara kwavachaita muvashandi vanogona kurasikirwa. Vatungamiriri vekambani vakafunga kuti yaive yakawanda njodzi KUSIMBISA vashandi vavo pane kuvasimudzira uye kuvasiya.
Mhedzisiro mukati meDhipatimendi Rekugadzira yaishamisa pamakore manomwe andakashanda ipapo. Nepo imwe yekambani yaive ichinetseka, dhipatimendi redu rakaderedza mitengo, kuwedzera mihoro, kuvandudza kugadzirwa, uye kudzikisa marara gore rega rega randaishanda ipapo. Ini ndakashandira imwe hombe media kambani iyo yaisatenda kana kupa mubairo kusimudzira kwehunyanzvi. Iyo kambani iri mumatambudziko izvozvi, nevashandi vanobva kuruboshwe uye kurudyi. Ini ndakashandawo kumamwe makambani madiki ane kukura kukuru uye kugona.
Cherechedzo yandakamboita pamusoro pemakore idambudziko rakaoma kwazvo rekuchengetedza vashandi vazhinji kugutsikana nekuunza tarenda nyowani pazvinenge zvichidikanwa. Mipengo inoshanduka nekufamba kwenguva mune hunyanzvi hwevashandi vakakura, hunyanzvi hunodiwa nekambani, uye hunyanzvi hwemushandi wepakati.
Dhaigiramu iri pazasi ndiyo nzira yangu yekuratidza izvi. Vashandi vakakura vanowanzo kusimudzira pakumhanya kwekambani uye ivo vanobva vatanga kupfuudza iyo kambani. Izvi zvinounza mukaha (A) mune izvo zvinodiwa nemushandi uye izvo zvinogona kupihwa nekambani. Kazhinji, izvi zvinotungamira mushandi kuchisarudzo, "ndinofanira kugara here kana kuti ndiende?". Inosiya kambani iine gap yekuzadza, uye kurasikirwa kukuru. Rangarira, idzi ndidzo superstars dzekambani.
Asi pane rimwe gap (B) futi, izvo zvinodiwa nekambani zvinopesana neizvo mushandi wepakati anogona kupa. Makambani ane budiriro kukura anowanzo buda kunze kwehunyanzvi seti yevashandi vavo. Vashandi avo vaikosha kutanga kambani hombe kazhinji havazi ivo vashandi vanodiwa kuti vasimudzire iyo kukura kana kuisiyanisa. Nekuda kweizvozvo, pane mukaha mune tarenda. Yakasanganiswa nekubuda kwevashandi vakakura, izvi zvinogona kukonzera kushomeka kukuru kwetarenda.
Ichi ndicho chikonzero makambani anofanirwa kutora njodzi yekuenderera mberi nekuvandudza vashandi vanozovhurirwa, pamwe nekutora vashandi vari nani. Ivo vanofanirwa kuzadza nzvimbo. Avhareji yevashandi havagone kuita izvi. Iyo kambani inofanirwa kutarisa kumwe kunhu kune tarenda pamatanho ese. Izvi, zvakare, zvinounza nekushatirwa. Avhareji yevashandi vanosemesa kutora vashandi varinani.
Iyi ingori dzidziso, asi ini ndinotenda vanhu vakareba vachishanda pamwe chete, avhareji maneja anowanzo tarisa zvakanyanya pautera hwevashandi vavo pane simba ravo Kunyangwe mushandi mukuru anozviwana ari pasi pe microscope yehunyanzvi iyo, ivo vanoudzwa, inoda kuvandudzwa. Kanganiso yakaipisisa inogona kuitwa nekambani kutsvaga tarenda kana ivo, vasingazive vane tarenda rakakura pasi pemhuno dzavo. Kutarisa pane kushaya simba kwevashandi kukuru kunobatsira pachisarudzo chavo chavanofanira kuita chekugara kana kuenda.
Nekudaro, basa remutungamiri mukuru rakaoma zvisingaite, asi rinogoneka. Iwe unofanirwa kutarisa kune simba revashandi, kwete kushaya simba, kuti unyatso kuyera kugona mushandi. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unopa mubairo nekusimudzira vashandi vakakura. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unotora tarenda rakakura musangano kuzadza maburi. Iwe unofanirwa kutora njodzi mukuvandudza vashandi vakura - kunyangwe iwe uchigona kuvarasa. Imwe nzira ndeyekuti iwe uve nechokwadi chekuti vachaenda.
Isangano risingadaviriki uye mutungamiri anoshamisa anogona kunyatso kuenzanisa mipata iyi nekuibata zvakanaka. Handisati ndambozviona zvichiitwa nemazvo, asi ndakazviona zvichiitwa nemazvo. Ndine chivimbo kuti hunhu hwemasangano makuru nevatungamiriri vakuru.
Imwe bhurawuza chimiro chaizotora musika!
Nov 18, 2006 pa7: 31AM
Ini ndinotenda waita zvionekedzo zvakakura uye ini ndichawedzera kuti kumakambani mazhinji vashandi vakakurumbira vanowanzotorwa mukana wepo ivo vashoma vashandi vachibvumirwa kungoita skate izvo zvinotungamira mukutsva-uye kusagutsikana zvachose nezvavakambotenda kuve basa rakakura.
Ndira 12, 2007 na5: 39 PM
Chinyorwa chikuru! Doevetails zvakanaka nehuchenjeri kubva ku "Kutanga Kuputsa Mitemo Yese". Waita zvakanaka - ndatenda!
Jan 13, 2007 pa 1: 56 AM
Kutanga Kuputsa Mitemo yese zvirokwazvo ibhuku rangu randinofarira pane hutungamiriri!